China White acrylic square shower shower tray fandroana fandroana, mety ho an'ny trano fandraisam-bahiny ambony sy mpamatsy | Belle
Fandroana fandroana fandroana acrylic square fotsy madio, mety amin'ny hotely ambony
Fitaovana: Acrylic, ABS
Habetsahana (sombin-javatra) 1 - 50 51 - 300 301 - 600 > 600
Logo namboarina (Min. Order: 30 Pieces)
Fonosana namboarina (Min. Order: 30 Pieces)
Fanamboarana sary (Min. Order: 30 Pieces)
Karazana: Tubs Spa Warranty: 2 taona
Serivisy aorian'ny fivarotana: ENY Fahafahana vahaolana amin'ny tetikasa: ENY
Fampiharana: Hotely / trano Style Design: nentim-paharazana
Toerana niandohana: Anhui, Sina Anaran'ny marika: Belle
Model Model: BS0012853 Style: nentim-paharazana
Fitaovana: Acrylic, ABS Fanamarinana: Fanamarinana CE
Loko: fotsy Habe: 70/80 / 90cm
Endrika: Square Fonosana: 1pc / baoritra
Anarana: fandroana fandroana
10000 Piece / Pieces isam-bolana
SHOWER LAY TRAY VOALOHANY VOALOHANY AMIN'NY BUBBLE FILM, ARY anaty boaty CARTON matevina. 40HQ dia afaka mamoaka manodidina ny 800PCS
Anti skid sy akanjo-mahatohitra, tsy misy tongotra mifatotra
Olon-dehibe roa mitsangana eo amboniny
Mavesatra maivana, endrika azo ovaina ary vita tsara. Ny tena manampy ny loko indrindra dia ny vokan'ny insulation thermique. Ny vokatry ny insulated thermal ny kovetabe fandroana akrilika dia tsara, izay afaka hitazona ny hafanan'ny rano mangatsiaka mandritra ny fotoana maharitra
F: Inona ny MOQ anao?
A: Ny MOQ anay dia 20 pcs ho an'ny efitrano fandroana ary 10 ho an'ny koveta fandroana. Hahazo fihenam-bidy mifandraika ianao raha manafatra bebe kokoa.
F: Ahoana ny santionany?
A: Manolotra santionany izahay alohan'ny hanaovana famokarana mba hahafahan'ny famokarana mifanaraka tsara amin'ny andrasan'ny mpividy.
F: Fitaovana ve ianao?
A: Ie. Ny orinasa misy anay dia ao Wuhu Izy io dia tsy lavitra an'i Shanghai sy Hangzhou. Tongasoa eto mba hitsidika ny orinasa raha avela ny fotoana.
A: 30% T / T mialoha, fifandanjana 70% amin'ny kopia BL.
F: Ahoana no ahazoana ny teny nindramina ny vokatra?
A: Alohan'ny ahazoantsika ny teny nindraminay, dia mba amarino azafady hoe inona ny vokatra ilainao, toy ny haben'ny vokatra, karazan-vera (vera mazava, vera mangatsiaka, vera lamba sns) ary hatevin'ny vera. Miorina amin'ny fampahalalana ireo ny teny nalaina. Indraindray, ny mpanjifa angamba tsy manana fampahalalana amin'ny antsipiriany toy izany, afaka nanolotra varotra mafana ho an'ny referansa ianao.
F: Afaka ny ho mpizara ve aho?
Ahoana no ahafahako ho tonga mpaninjara? A: Eny tokoa, tongasoa izahay ho mpaninjara Mifandraisa aminay avy hatrany raha mila tsipiriany misimisy kokoa amin'ny alàlan'ny fandefasana fanadihadiana aminay.
F: Azonao atao ve ny mandray anao OEM na ODM?
A: Ie. Azontsika atao ny manolotra serivisy OEM na ODM arakaraka ny fitakian'ny mpanjifa, ary manome vahaolana matihanina tokana.
F: Inona ny seranan-tsambonao lehibe?
F: Azonao alefa amiko ve ny lisitry ny vidinao manontolo?
A: Miala tsiny, satria misy ifandraisany amin'ny lafin-javatra maro ny vidiny, toy ny kalitao sy ny habetsahany, aorian'ny fanamafisanay ny fangatahanao antsipirihany, dia hatolotra anao ny teny nindramina.
Ahoana ny fomba hisafidianana ny lovia fandroana ny efitrano fandroana?
Amin'ny maha iray amin'ireo teny solontenan'ny fiainana salama sy lamaody tato anatin'ny taona vitsivitsy, ny efitrano fandroana dia nilalao anjara toerana lehibe kokoa tamin'ny fiainan'ny olona. Tsy afaka mizara efitrano fandroana mahaleo tena fotsiny izy io. Miaraka amin'ny efitrano fandroana, rehefa mampiasa lohan'ny fandroana mankany amin'ny fandroana, ny rano dia tsy hikororoka any ivelany ary handena ny gorodon'ny trano fidiovana iray manontolo. Izy io koa dia afaka manafana mafana amin'ny ririnina, miaraka amin'ny endrika manankarena sy loko marevaka, Ankoatry ny fiasan'ny fandroana dia haingo tsara ihany koa izy io. Fa ny efitrano fandroana dia tsy mety amin'ny fianakaviana tsirairay. Na mety aza dia tsy ny fianakaviana rehetra no afaka mividy sy mametraka azy. Na izany aza, raha ny fahitana ny fahasalamana sy ny fahadiovana dia tsara kokoa ny manasaraka ny toerana fisasana amin'ny ivelany, izay tsy mampihena ny isan'ny nanadiovantsika ny fandroana, fa mahatonga ny fiainantsika ho salama kokoa.
Ka, ankoatry ny efitrano fandroana sy efijery, manana safidy ve isika? Eny, izany no fitoeran'ny fandroana ao amin'ny trano fandroana tokana. Na dia tsara aza ny mametraka miaraka amin'ny efitrano fandroana, ny fametrahana tokana sy ny lambam-pandroana tsara dia safidy tsara ihany koa ho an'ny fianakaviana tsotra.
Safidy kovetan'ny efitra fandroana fandroana: ny efitrano fandroana dia mizara roa: koveta avo sy koveta ambany. Ny karazana tanky dia mety hipetrahan'ny olona. Izy io dia mety amin'ny fianakaviana misy zokiolona na ankizy. Izy io koa dia azo ampiasaina amin'ny tanjona maro, toy ny fanasan-damba sy fitehirizana rano. Ny fatiantoka dia manahirana amin'ny fanadiovana. Mifanohitra amin'izany, ny tavy fohy dia tsotra ary ny vidiny dia ambany noho ny tavy.
Ho fanampin'izany, tokony hisafidy ny lovia fandroana misy takelaka azo esorina isika hanamorana ny fanadiovana sy hisorohana ny fofona.
1, Safidy fisehoana: ny endrika bika aman'endrika dia tokony hifanaraka amin'ny filaminan'ny toerana fidianao, handinika ireo sakana manodidina, ary avy eo misafidy ny safidy tianao.
2, Safidy haavo: ny lovia fandroana ambany dia mety kokoa amin'ny efitrano fandroana. Ny takelaka fandroana avo dia apetraka misaraka. Rehefa misafidy ilay fitoeram-pandroana tokana dia tandremo ilay izay milentika kokoa.
3 、 Safidy koveta fandroana tsy misy na inona na inona: ny fantsom-pandroana mafy dia miraikitra amin'ny tany. Amin'ny ankapobeny dia mandray fitaovana manokana miaraka amina fiasan'ny insulma.
Manolo-kevitra ny namana izay nohaingoina mba tsy hisafidy ny koveta fandroana mafy, satria tsy azo ovaina ny fantsakan'ny fantsom-pandroana mafy; Ny fitoeram-pandroana efitrano fandroana dia azo apetaka amin'ny trano voaravaka, ary ny haavon'ny tany dia azo ahitsy malalaka. Ity famolavolana ity dia mahatonga ny fantsom-pandroana ho maina sy hadio.
Teo aloha: Efitra fandroana mihidy varavarana misosa amin'ny jiro ambony sy fandroana
Manaraka: 2021China fandroana trano fandroana vita tavoahangy vita amin'ny tavoahangy vita amin'ny tavoahangy vita amin'ny akrôna misy zipo
Fandroana akrilika sy fandroana
Fandroana fandroana akrilika
Takelaka fandroana acrylic Bathtub
Fitaovana fandroana koveta vita amin'ny acrylic
Fandroana misy fandroana
Bathtub Whirlpool sy Combo
Fandroana fandroana whirlpool
Combo fandroana fandroana whirlpool
Sehatra fotsy madio no milatsaka amin'ny fanasana plastika 600mm de ...
2021 fivarotana mafana fivarotana any ivelany Whirlpool milomano Sw ...